नक्कल वा नक्कल छैन? - Semalt का विशेषज्ञ, नतालिया खाचातुर्यनले सही जवाफ जान्दछन्!
नक्कली सामग्रीले विस्तारित अवधिको लागि एसईओ विशेषज्ञहरू बीच भ्रम पैदा गरेको छ। यस्तो लाग्छ कि SEO बगबियरलाई हटाउनुपर्दछ अन्यथा यसले तपाईंको साइटलाई रैंकिंगबाट हटाउन सक्छ। जे होस् डुप्लिकेट सामग्री पेनाल्टीको साथ आउँदछ, त्यहाँ एक तरीकाले Google ले क्रमबद्ध एल्गोरिथ्म प्रयोग गर्दछ कि नक्कल सामग्रीले तपाईंको साइटमा अन्य पृष्ठहरूमा असर गर्दैन।
Semalt को सामग्री रणनीतिकार, नतालिया खाचुर्यन बताउँछ कि गुगलले नक्कल सामग्री रैंकिंग गर्दैन यदि त्यहाँ त्यस्तै सामग्रीको साथ अर्को पृष्ठ छ जुन साइटमा बढी लोकप्रिय छ। यदि तपाइँको वेबसाइट को लागी उही सामग्री को लागी बहु पृष्ठहरु छन्, गुगल लाई सही संस्करण छनौट गर्न गाह्रो समय आउँछ। यसले खोज परिणाममा सामग्रीको केवल एक संस्करण मात्र प्रदर्शन गर्दछ, र अन्य संस्करणहरू लुकेका छन्। धेरै एसईओ विशेषज्ञहरु यसलाई पेनाल्टीको रूपमा हेर्दछन्। यस्तो परिदृश्यमा तीनओटा चीजहरू हुन्छन्:
गुगलले पृष्ठलाई दर्जा दिदैन;
त्यो पृष्ठको वजन नगण्य छ;
साइट गुणस्तर र अद्वितीय सामग्री को एक विश्वसनीय स्रोत को रूप मा चिह्नित हुनेछ;
यसले वेबमास्टर्सलाई यस्तो लागी पेनिस जस्तो महसुस गर्ने कारण दिन्छ, तर यो जान्नु महत्त्वपूर्ण छ कि यो सबै खोजी ईन्जिनहरूले डील गर्नुपर्दैन। त्यहाँ डुप्लिकेट सामग्रीमा प्रयोग गरिने धेरै रणनीतिहरू छन्, तर सबै वेबसाइट प्रयोगकर्ताहरू र खोजीकर्ताहरूको लागि सबै भन्दा राम्रो रूचिमा छैनन्।
त्यहाँ धेरै नेटवर्कहरू वेब साइटहरू द्वारा प्रयोग गरिएको छ विशेष गरी सामग्री डुप्लिकेट गर्न आशाका साथ कि यसले खोजी ट्राफिक क्याप्चर गर्दछ। तिनीहरू साइटमा कुनै पनि मान थप्नको लागि होईन, र सामान्यतया, उनीहरूले कुनै मान थप गर्दैनन्। तपाइँले खोज इन्जिन कहाँ गल्ती भयो भनेर जान्नको लागि योजनाको साथ आउन सामग्रीको सामूहिक रूपमा विचार गर्न आवश्यक छ। त्यहाँ नक्कल सामग्रीका असंख्य प्रकारहरू छन्:
प्रतिलिपि गरिएको पृष्ठहरू
साइट मालिकको रूपमा, तपाईं अर्को वेबसाइटमा एक बहुमूल्य सामग्री भेट्टाउन सक्नुहुन्छ। सामग्री पढिसकेपछि, तपाईंलाई लाग्छ कि तपाईं यसलाई आफ्नो साइटमा साझा गर्न चाहानुहुन्छ। यद्यपि यो राम्रो विचार होईन किनकि यो तपाईंको मूल सामग्री होईन र यो राम्रोसँग मूल्यवान् हुनेछ। अन्तत: त्यस्तो अभ्यासले तपाईंको वेबसाइटको डोमेन स्कोरमा समग्र ड्रप निम्त्याउन सक्छ।
यस समस्यालाई ठीक गर्ने उत्तम तरिका भनेको क्रस-डोमेन क्यानोनिकल ट्याग प्रयोग गर्नु हो। मूल सामग्री बिभिन्न वेबसाइटमा छ भनेर देखाउन यसलाई थप्नुहोस्। खोजी ईन्जिनहरूले तब थाहा पाउनेछन् कि सामग्री प्रतिलिपि गरिएको थियो र यो तपाईंको साइटमा जानाजानी गरिएको छ।
तपाईंले बुझ्नु पर्दछ कि यस अवस्थामा लिंकको सबै तौल सामग्रीको स्रोतमा जान्छ। यस तरिकाले, यदि तपाईं धेरै लिंकहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, तपाईं वजनको एक सानो प्रतिशत कायम गर्नुहुनेछ। यदि व्यक्तिले सामग्री मनपराउँदछ भने, उनीहरूले साइट भ्रमण गर्ने पटक पृष्ठ पृष्ठ रैंकिंगमा कमी देखिन सक्छ।
नक्कल उत्पादन जानकारी
एउटा यस्तो अवस्था लिनुहोस् जहाँ तपाइँसँग एउटा कम्पनी छ जुन बिभिन्न निर्माताहरूबाट उत्पादनहरू प्राप्त गर्दछ। तपाइँले तपाइँको साइटमा राख्नको लागि जानकारी, वर्णन, चश्मा, र छविहरू जस्ता जानकारी प्राप्त गर्न आवश्यक पर्दछ। तपाइँ सटीक जानकारी निर्माता द्वारा दिए अनुसार प्रदान गर्नेछ।
कसरी यसलाई ठीक गर्ने: तपाईंले आफ्नो वेबसाइट अलग सेट गर्नुपर्नेछ। तपाइँले वर्णनहरू पुन: लेख्न र तपाइँको उत्पादनको लागि अद्वितीय फोटोहरू पोष्ट गर्न आवश्यक पर्दछ, जुन तपाईं अन्य साइटहरू जस्तै उत्पादन समीक्षाबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
बेफाइदा: रणनीति समय खपत हुने हुन सक्छ किनकि तपाईलाई उत्पाद वर्णन गर्न उपयोगी जानकारी जम्मा गर्नु पर्ने हुन्छ।
बहु-पृष्ठ उत्पादन सूची
यसमा युआरएलहरूको उत्पादन समावेश छ वा यदि तपाईंको साइटमा त्यस्तै मुख्य उत्पादहरू वर्णन गर्ने धेरै पृष्ठहरू छन्।
कसरी मुद्दालाई ठीक गर्नेः उदाहरणको लागि, यदि तपाईं पाँच वस्तुहरूसँग व्यवहार गर्दै हुनुहुन्छ र प्रत्येक पटक तपाईं नयाँ यूआरएल उत्पन्न गर्नुहुन्छ भने तपाईले आइटमलाई वर्णमाला क्रमको सट्टा साईज र मूल्यको आधारमा क्रमबद्ध गर्नुहुन्छ भने, तपाईंसँग विभिन्न यूआरएलहरूमा कम सामग्रीका साथ कम पृष्ठहरू हुनेछन्। ।
नक्कल सामग्री तनावपूर्ण हुन सक्छ। यदि तपाईं यस मुद्दाको बारेमा चाँडो नै सचेत हुनुहुन्छ भने, यसले तपाईंको रैंकिंगलाई प्रभाव पार्नु अघि यसले तपाईंलाई यो समाधान गर्न मद्दत गर्दछ। डुप्लिकेसनको माध्यमबाट तौल पास गर्ने ले तपाईको र्या on्कि impactमा कुनै खास प्रभाव पार्दैन भन्ने कुरा कसरी पक्का गर्ने भन्ने योजनाको साथ तपाईं सक्षम हुन सक्नुहुनेछ। यी मुद्दाहरूको समाधान समय खपत हुने हुन सक्छ, तर तिनीहरू समयको लागि लायक छन् किनकि यसले तपाईंको वेबसाइटको प्रत्येक भ्रमणको साथ उच्च आरओआई उत्पादन गर्न मद्दत गर्दछ।